बल्ल खुल्यो नागा र सामन्थाको स म्बन्धवि च्छेद हुनुको मुख्य कारण, प्रमुख कारण यि युवक पो रहेछन् ! – Kavrepati
Home / अन्तरास्ट्रिय / बल्ल खुल्यो नागा र सामन्थाको स म्बन्धवि च्छेद हुनुको मुख्य कारण, प्रमुख कारण यि युवक पो रहेछन् !
admin2weeks ago	अन्तरास्ट्रिय Leaveacomment 768 Views
काठमाडौँ । साउथ फिल्मका चर्चित नायक नागा चैतन्य र नायिका सामन्था रुथ प्रभु अन्तत एकअर्कासँग सँगै नबस्ने भन्दै छु’ट्टीएका छन् । उनीहरुको सम्बन्धमा पूर्ण विराम लागेसँगै अनेकन अड्कलबाजीहरु भएका बेला उनीहरुको स’म्बन्धवि’च्छेदको प्रमुख कारण सामन्था पछिल्लो समय फेसन डिजाइनर साथी प्रितम जुकालकरसँगको सम्बन्ध भएको बताइएको छ ।
यो जोडीको डि’र्भोस हुनुको खास कारण फेसन डिजाइनर साथी प्रितम जुकालकर नै भएको भारतीय मिडियाहरुल्े दाबी गरिरहेका छन् । यसअघि नागाको परिवारले सामन्थाले अभिनयलाई छो’डेर पारिवारिक जीवन बिताउन दबाब दिइरहेका कारण सामन्थाले डि’र्भो’सको निर्णय लिएको बताइएको थियो ।
गत सातामात्र उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूहरु अलग्गिने निर्णय लिएका थिए । सामन्था र नागाको यो निर्णयले सामन्थाका पिता जोसेफ र नागाका पिता तथा अभिनेता नागार्जुनले ‘दुःखित’ बनेको बताएका छन् ।
अन्य सममचार : दैलेखमा नयाँ नोटका लागि जनतालाई सास्ती, बैंकले दिँदैनन् ब्यापारीलार्ई कमिशन चाहियो काठमाडौ । यस वर्ष दशैंका लागि असोज ४ गतेबाट राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई नयाँ नोट वितरण गरेको छ । काठमाडौ लगायत मुलुकका सबै जिल्लामा दसैंका लागि नयाँ नोट लिन सम्बन्धीत बैंक वा वित्तिय संस्थामा जान राष्ट्र बैंकले सूचना मार्फत सूचित गरेको छ । तर दैलेखका सर्वसाधारणले भने नयाँ नोटकै लागि सास्ती भोग्नु परेको छ ।
राष्ट्र बैंकले आफुले तोकेको वित्तिय संस्था र बैंक वाहेक अन्य बैंकमा नयाँ नोट उपलब्ध नगराएका कारण दैलेखमा सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परेको हो । काठमाडौ उपत्यका बाहेको हकमा राष्ट्र बैंकको प्रदेश स्थित कार्यालय वा राष्ट्रिय बाणीज्य बैंकले तोकेको शाखामा मात्र नयाँ नोट साट्न सूचित गरेको छ । दैलेखमा वाणीज्य बैंकमा अन्य समयमा समेत अत्याधिक भिड हुने गरेको छ ।
नयाँ नोेट वाणीज्य बैंक वाहेक अन्य नीजि बैंकलाई उपलब्ध नगराएका कारण उनीहरुले सेवा दिएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले अधिकार नदिएका कारण आफुहरुले सेवा दिन नसकेको नीजि बैंक संचालकको भनाई छ । तर राष्ट्र बैंकमा पहुँच भएका ब्यवसायी र ब्यापारीले भने नयाँ नोट साटेर ब्यापारीक फाइदा लिएका छन् । कमिशन लिएर सर्वसाधारणले ब्यापारीवाट नयाँ नोट लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
दसैंमा नयाँ नोट नपाएपछि सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेका छन् । दैलेखका स्थानिय जनक थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा दसैंमा पैसा साट्न कहाँ जाने भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ब्यापारीकोमा जाने की वाणीज्य बैंकमा जाने जनता जान्न चाहन्छन् भन्दै रोष ब्यक्त गरेका छन् ।
Previous वकील मानशिन्दे भन्छन्– शाहरुख खान जस्ता स्टारका छोरा आर्यनले शिपमा ड्रग्स बेच्न जरुरत छैन
Next आफ्नै बुबालाई भेट्न पनि अपोइन्टमेन्ट लिनुपर्छ भन्दै धरधरी रोए आर्यन